Zac Efron kwụsịrị ile onwe ya anya | TeraNews.net
Zac Efron kwụsịrị ile onwe ya anya
na-ede akwụkwọ Kravetz Pavel E bipụtara 24.04.2021
The mmekọahụ nnọchianya nke narị afọ nke 21, Hollywood omee Zac Efron unpleasantly juru ndị Fans. Ma ọ dịkarịa ala, ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ kpakpando na mgbasa ozi mgbasa ozi kpatara ọgba aghara n'ihi mgbanwe dị iche na foto emelitere.
Zac Efron akwụsịla ịdị ka ya
Ihe niile malitere site n'eziokwu bụ na onye omee ahụ bipụtara akụkọ na ya na enyi ya nwanyị Vanessa Valladares kwụsịrị. Akọwapụtabeghị ihe kpatara ya, mana enwere ike ikwu nke ọma na n'ihi usoro eserese eserese na mba dị iche iche.
Tinyere akụkọ a, kpakpando Hollywood weputara foto ya. Ọ bụ site na onyonyo a ka ọgbụgba gburugburu ụwa malitere Zac Efron. Na nkenke, ihe onye na-eme ihe nkiri kwuru yiri nke a:
Zachị jawline ewerela ihu nwere akụkụ anọ karịa ya. O doro anya na ọdịdị ihu Spartan na-enye obi ike, mana ngwa ngwa ịgbanwe ọdịdị ihu nwere ike ime naanị ịwa ahụ.
Onye omee ahụ ritere uru ahụ oke ọsọ ọsọ ma mee onwe ya ahụ efe. Nke a karịrị ike ndị ọkachamara. Ghara ikwu banyere ndị na-eme ihe nkiri na usoro iheomume ha na nri kwa ụbọchị.
Na agbachitere Cool Hollywood Onye na-eme ihe nkiri si na Nnapụta Malibu
Tinyere okwu na-adịghị mma banyere mgbanwe n'ọdịdị nke kpakpando Hollywood, ị nwekwara ike ịchọta nyocha dị mma. Zac Efron n'ezie dị jụụ. Dị otú ahụ na ọdịdị ihu na ọgụgụ, ị nwere ike ikwu na isi ọrụ ọ bụla edinam nkiri.
Onye omee ahụ n'onwe ya na-ezere ịza ajụjụ banyere ịwa ahụ. N'ezie, ọ dịghị mkpa. E kwuwerị, onye ọ bụla na-ekpebi ọdịnihu ya. Onweghi ndi Fans nwere ikike ikpe Zac Efron ikpe. Otu ilu dị mma ebe a - "Ọ dị mfe ịhụ ntụpọ na anya onye ọzọ, mana ọ bụghị akara aka ịchọpụta log dị n'anya nke gị." Ka anyi choo Zach ihe kachasi nma n'ime oru ohuru a, nke o jiri nwayọ gbanwee ghọọ nwoke obi ọjọọ.
MINI PC Beelink GKmini 8/256 na Windows 10 - nyocha
Kedu ihe ọ drinksụ drinksụ oyi kacha mma ị toụ na oge okpomọkụ
Nkọ TV - 4K na Bezelless DL na DN
Kedu nke ka mma ịzụta TV - na ma ọ bụ na-enweghị Smart TV
Nhazi ime ụlọ - gịnị kpatara ị gaghị enwe ike ịrụzi na-enweghị imewe
G50S - njikwa ntanetị maka TV-BOX: nyocha, echiche
Ihe ị ga-ewere na njem gị: ndepụta nke ihe ndị dị mkpa
Windows 11 - ngwaike chọrọ nwere ike lie na sistemụ nwa osisi ahụ
Apple iphone SE 2022 nwere ike ikwugharị akara aka nke iPhone Obere
Netflix - anyị nwere ndị debanyere aha 200
Santa Fe Inspired 2018: chic in Korean
Nhazi mmemme maka ịkụ ọkpọ TV: nyocha, ndụmọdụ
JBL Charge 4 - oke okwu nkwu okwu na Ike Bank